Fikarohana momba ny firaisana Ny Dadabe Bebe Kamban-teny (anglisy) dia nipoitra tamin'ny maha-zana-bavy zanaka-vavy ny zanakavavin'izy roa vavy, mampiseho ny fanombanana ny fotoana sy ny fanovana eo amin'ny lahy sy vavy amin'ny fampidirana ilay Dadabe. Ny zava-misy iainan'ny Ma Khin Ma Gyi sy Ma Khin Ma Nge: Ny zokiolona ao amin'ny zaridaina miozolomana - Fikarohana momba ny vatana vaovao
mpikaroka: Ian Stevenson. MD
From: Ny Fampandrosoana sy ny Biolojia, Ny Volan'ny 2, nataon'i Ian Stevenson, pejy 2000-2017
Ny fiainana sy ny fahafatesan'i U Maung Muang sy Daw Aye Hla
Ny anaran'ny raibe amin'ity raharaha ity dia U Maung Maung ary ny bebeny dia Daw Aye Hla. Ho an'ny fahatsorana, hantsoinay hoe Maung ny raibe ary ny renibeny ho Daw. Nipetraka tao Burma izy mivady izay fantatra amin'ny anarana hoe Myanmar.
Maung dia foko indianina, zanaky India, saingy naka anarana birmana izy. Burma dia eo atsinanan'ny faritra avaratry India. Ao amin'ny sarintanin'i Birmania aseho amin'ny ankavanana, ny tanàna tafiditra amin'ity tantara ity dia misy an'i Mandalay, izay iantsoana hotely sy trano filokana any Las Vegas, Rangoon sy ny tanànan'i Pantanaw, izay eo amoron'ny renirano Irrawaddy andrefan'ny Rangoon. Ny renirano Irrawaddy dia voamariky ny tsipika manga. Tsindrio ny sary hanitatra azy.
Maung Mihevitra ny tenany ho Silamo
Ny papa Maung dia Buddhist, saingy maty talohan'ny nahaterahan'i Maung izy. Ny reniny dia nanambady lehilahy izay Silamo, ary niova fo ho amin'ny finoana Silamo izy. Noho izany, i Maung dia nitsangana tamin'ny maha Silamo azy. Tsy nianatra izy fa Bodista ny rainy hatramin'ny herintaona talohan'ny nahafatesany tamin'ny taona 44. Noho izany, nandritra ny androm-piainany, nanambara ny tenany ho Silamo i Maung.
Maung dia mendri-piderana, nahazo fanabeazana ary lasa biraom-panjakana Burmese. Nanana fahaizana mekanika koa izy ary nanamboatra fitaovam-piadiana, fiara ary fiambenana. Manana basy i Maung, izay ampiasainy hikaroka vorona.
Voamarika fa marin-toetra sy tsotra izy, saingy mora nodorana tamin'ny fandokoana. Noho izany dia tena tsara fanahy tamin'ireo izay nidera azy izy.
Maung dia nanandratra akoho. Nofeheziny tamin'ny kibon-jazakely kely ny kofehy afatony amin'ny tsato-kazo eo amin'ny tranony ny tendrony hafa amin'ny kofehy mba tsy handosiran'ireo zana-borona. Raha vantany vao fantatry ny zana-borona fa ny tany no fonenany, dia hafahany izy ireo, satria tsy handositra intsony izy ireo. Tsy nihinana ireo akoho ireo izy fa kosa nampiasainy hanatody, izay nohanin'ny fianakaviany ho loharanon-tsakafo. Amin'ny maha silamo azy dia nihinana hena izy.
Daw, vadin'i Maung, manameloka ny fitsaboana ny akoho sy ny fihazana voromailala
Maung dia nanambady an'i Daw, izay Bodista nafana fo. Daw dia tsy nahita fianarana sy tsy nahay namaky teny, saingy izy dia lolom-po sy kiraro.
Amin'ny maha Bodista azy, i Daw dia nihevitra fa novonoin'i Maung tamin'ny vorona niaraka tamin'ny basy sy ny famatorana ny akoho tamin'ny tongony izy ireo ho toy ny fahadisoam-panantenana, izay hamorona karma ratsy ho azy. Nanambara tamin'i Maung i Daw fa hampihatra azy ho sazy amin'ny fiainana ho avy izany.
Maung sy Daw dia nanana zanakavavy, izay nantsoiny hoe Daw Mya Tin. Ho fahatsoram-po, hiantso ny zanakavavin'izy ireo tahaka an'i Tin izahay.
Maung ny Miozolmana ary nanangana ny Bodista separat
Nihamafy ny fifandonana ara-pivavahana teo amin'i Maung sy Daw ka nanapa-kevitra ny hisaraka izy ireo. Samy nanantena ny hihavana izy ireo, saingy tsy nisy izany. Maty nandritra ny roa taona izy ireo rehefa maty i Maung tao amin'ny tanàna Burmese Pantanaw tao 1950, tamin'ny taona 44. Pantanaw, any atsinanan'i Rangoon, dia eo akaikin'ny renirano Irrawaddy lehibe, izay manome ny mponina any amin'ny trondro sy trondro ho loharano sakafo.
Taorian'ny nahafatesan'ny vadiny, dia nanomboka nanandrana rà i Daw ary niahiahy fa manana tuberculosis izy. Nihevitra koa izy fa mety ho voan'ny tazomoka izy. Maty tany amin'ny tanàna Burmese Mandalay izy tamin'ny 1954, efa-taona taorian'ny nahafatesan'ny vadiny.
Tin dia mandray fampisehoana mampiseho ny ray aman-dreniny izay manambara fa hibebaka toy ny zanany izy.
Ny zanakavavin'i Maung sy Daw, Tin, dia nanambady lehilahy iray antsoina hoe Thaw ary nipetraka tao amin'ny tanànan'i Ba Htu Myo.
Bevohoka i Tin ary nandritra ny volana 4 nihetsi-jaza dia nanonofy izy izay niseho ny ray aman-dreniny ary nilaza fa hateraka indray izy ireo satria zanany.
Tin dia niasa tamin'ny volana 7 nandritra ny fitondrany vohoka ary tamin'ny febroary 5, 1961, nanana tovovavy roa izy. Ny kambana dia samy manana ny endriky ny endriny sy ny fikarakarana ny laboratoara dia nanamafy fa izy ireo dia mpirahalahy, tsy mitovy ny kambana. Taorian'ny nahaterahan'ny kambana dia nifindra tany amin'ny faritanin'i Burmese Rangoon ny fianakaviana.
Ny zazavavy roa vavy dia nantsoina hoe Ma Khin Ma Gyi sy Ma Khin Ma Nge. Ho tsotra, hiantso azy ireo ho Gyi sy Nge isika.
Gyi manaporofo ny fahaterahany amin'ny fahavoazana ho an'ny vorona amin'ny fiainany taloha tahaka an'i Maung
Gyi dia niteraka fahavoazana nahaterahana roa. Nanana hadisoana lehibe teo amin'ny tanany havia izy, izay nasehon'ny rantsan-tànana ny rantsantanany. Nanana kileman-tohatra kely teo amin'ny tongony ambany rihana izy ary nisy ny famaritana boribory, toy ny hoe nisy tady iray nafatotra teo amin'ny tongony ambany izay nahatonga ilay hadisoan'ny tongony.
Nanomboka niteny i Gyi tamin'izy telo taona. Teo anelanelan'ny efatra sy enim-bolana izy dia nanomboka niresaka momba ny fiainana teo aloha tahaka ny rain'ny reniny, Maung. Nolazainy fa teraka tamin'ny fampijaliana ny tanany havia izy satria teo amin'ny fiainany toa an'i Maung, nampiasa basy izy hamono vorona. Nolazainy fa ny fametrahana boribory eo amin'ny tongony ambany ambany dia noho ny famatorany ny akoho amin'ny tongony mankany amin'ny toerana. Tsy nisy tantara ratsy momba ny fahaterahana teo amin'ny fianakaviana.
Hitan'ny ray aman-drenin'i Gyi fa nanjary nalahelo izy ary nijery ny "lavitra" rehefa miresaka momba ny fiainany taloha. Vokatr'izany, ny rainy dia nanapa-kevitra ny hanakana tsy hiresaka momba ny fiainany taloha. Na dia nankato ny rainy tao an-trano aza i Gyi, dia mbola niresaka momba ny fiainany teo aloha niaraka tamin'ireo mpiara-milalao aminy izy.
Ankoatra izany, naneho ny faniriany hankany Pantanaw i Gyi nandritra ny fahavaratra satria nilaza izy fa be dia be ny trondro sy trondro any. Pantanaw dia 70 kilometatra na 44 kilaometatra avy any Rangoon, toerana nipetrahan'ny fianakaviana.
Ny kambana sy ny ray aman-dreniny dia mbola tsy tany Pantanaw, ka tsy nahafantatra an'io zava-misy io tamin'ny fomba mahazatra i Gyi. Tsarovy fa niaina tao Pantanaw i Maung tamin'ny fotoana nahafatesany.
Nge dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny fa izy dia Daw, Reny Tin, tamin'ny fiainana taloha
Matetika ireo ray aman-drenin'ny kambana dia samy nitandrina ny ankizivavy nifamotoana tamin'ny fiainany teo aloha. Gyi dia hilaza amin'i Nge fa i Nge dia Daw tamin'ny fiainany taloha. Nge dia nilaza tamin'i Gyi fa izy no Maung. Ankoatra izany, i Nge, raha miresaka amin'ny olona ivelan'ny fianakaviana, dia manondro ny reniny, Tin, toy ny zanany vavy.
Nge dia miresaka manokana momba ny fiainany taloha i Nge rehefa nidradradradra izy. Nolaviny tamin'ilay olona izay nanakorontana azy ary nilaza fa izy dia Daw ary nalahelo izy fa nalahelo. Nge dia nanohy nanao izany farafaharatsiny hatramin'ny 1972, raha toa ka efa 12 efa ho folo taona ny kambana.
Ny fitondran'olombelona sy ny toetran'i Gyi izay nisaintsaina ny fiainany taloha toy ny Maung, ilay Dadabe Maternal.
Gyi dia naneho tamim-boninahitra tamin'ny fomba masculine. Nifidy ny hitafy ny akanjon'ny zazalahy izy ary nanao izany isaky ny afaka farafaharatsiny hatramin'ny sivy taona. Nangataka mihitsy aza izy mba hanao ny akanjon'ny zazalahy iray manokana natao ho azy, izay vita. Izy koa dia nanapaka ny volony tamin'ny endriky ny ankizilahy iray.
Tian'i Gyi ny milalao fiara sy kamiao, fa tsy saribakoly, izay toa maneho ny fitiavany an'i Maung amin'ny fanamboarana milina sy fiara. Tiany koa ny milalao miaraka amin'ny tovolahy, fa tsy zazavavy hafa.
Nasehony ihany koa ny zotom-po tamin'ny fisamborana bibikely ary avy eo nanimba azy ireo, naneho ny fomba fanaon'i Maung amin'ny fikolokolo vorona amin'ny basy. Gyi dia nankafy ny sakafony ary te hitazona akoho tao an-tranony, toa an'i Maung. Maung dia foko Indianina ary nankafy sakafo Indiana izy, toy ny curry, ary toy izany koa i Gyi. Mifanohitra amin'izany, tsy misy olona hafa ao amin'ny fianakavian'i Gyi tia ny sakafo Indiana.
Ny fitondrantena sy ny toetran'i Nge izay maneho ny fiainany taloha toy ny Daw, ny renibeny reniny
Mifanohitra amin'i Gyi, Nge dia tia ny milalao saribakoly, tia mandihy sy mihira ary tia voninkazo. Nge te-hilalao ny tovovavy hafa i Nge, nitondra ny volony tamin'ny endriky ny tovovavy iray ary tena nanahy ny momba azy. Niaro ny tenany izy noho i Gyi sy Nge tamim-piraisankina tamim-pitandremana ny tavany sy ny sandriny, izay bodofotsy kosmetika vita amin'ny hoditra hazo ampiasain'ny vehivavy ao Birmania ho fanampiana hatsaran-tarehy. Gyi kosa dia nandà tsy hampiasa ny paste paste.
Nge manaja ny moanina bodista i Nge ary nandray anjara tamin'ny fanomezana sakafo azy ireo. Tsotra ny nahatsiaro an'i Dawd. Tsy naneho ny fanajana ny moine i Gyi, izay maneho ny finoana silamo Maung.
Nge dia marefo, indrindra manoloana an'i Gyi, izay naneho ny fitondrantenan'i Daw momba ny hatezerana manoloana ny vadiny Maung. Gyi kosa, mifanohitra amin'izany, dia nifanaraka.
Rehefa niditra ny sekoly ny kambana dia hita fa malaza kokoa noho ny Gyi i Nge, izay naneho ny tsy fahaizana mamaky teny an'i Daw. Gyi, tsaroany, dia nahay nandanjalanja, nahita fianarana ary niasa ho mpiasa mpiasam-panjakana. Nge tsy nisotro kafe, afa-tsy dite ihany, izay naneho ny fanirian'i Daw. Gyi nankafy kafe sy dite, toa an'i Maung.
Ny dokotera ny kambana dia mamelabelatra ny fiainany taloha
Tamin'ny taona 6 dia nihalehibe i Gyi ary nahavita asa tsara kokoa noho i Daw. Ireo endri-javatra ireo dia nifanaraka tamin'ny fiainana niainan'i Gyi, toa an'i Maung, lehilahy iray sy ny fiainan'i Nge taloha, toa an'i Daw, vehivavy.
Raha vao 13 taona i Gyi, dia nilaza izy fa tiany ho zazalahy.
Niharatsy ve ny nahaterahan'i Gyi noho ny karma mifandraika amin'ny fitsaboana ny vorona taloha?
Gyi, fony zaza, dia nanambara fa ny famoahana ny tanany havia dia vokatry ny vorona mitifitra amin'ny basy ary ny fametrahana ny tongony ambany ambany dia noho ny famatorana ny akoho amin'ny lahatsoratra mandritra ny fiainany taloha tahaka an'i Maung.
Tsy azo inoana fa nanjary karmika ny deformitisan'i Gyi, satria raha toa ka miteraka fahavoazana tahaka izany ny olona rehetra nitifitra na nogadraina, dia tsy hisy intsony izany hadalàna izany amin'ny vahoaka.
Ian Stevenson, MD dia nieritreritra fa ny eritreritra ao an-tsain'ny fanahy dia mety hisy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny vatana mandritra ny fitondrana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mihevitra ny fanahin'i Maung fa mety hampisy hadisoana mifandraika amin'ny fitsaboana ny vorona mifototra amin'ny fananaran'ny vadiny, dia mety nopotehina tao amin'ny vatana mangatsiakan'i Gyi ireo fiheverana na hevitra ireo hamoronana ny fahaterahany. Izaho koa mankasitraka ity fanazavana ity.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny sarin'i Maung sy Daw dia tsy nomena tamin'ny fanontana nataon'ny Dr. Stevenson mikasika ireo tranga ireo, ka tsy fantatsika raha ny endriky ny endrika Maung | Gyi sy Daw | Nge dia mitovy. Marihina anefa fa nanatanjaka ny fiainan'ny fiainam-bahiny ny kambana roa.
Fiovan'ny lahy sy ny vavy amin'ny olana eo amin'ny lahy sy ny vavy: Maung, ilay raibe, dia lahy ary teraka tamin'ny vatana vaovao indray ho iray amin'ireo kambana vavy zanany vavy, Gyi. Naneho toetra masculine i Gyi, anisan'izany ny filalaovana fiara kilalao sy ny fitafian'ny ankizilahy, mampiseho taratra ny fiainana lasa lehilahy. Nanamarika ihany koa i Gyi fa naniry ny hahaterahany amin'ny maha-zazalahy azy.
Ao amin'ny andiam-panahin'i 1500 izay nanamarina ny tranga famerenana ny fahazazana tamin'ny taona lasa izay voarakitra ao amin'ny University of Virginia, ny fiovan'ny lahy sy ny vavy dia mitranga ao anatin'ny 10 isan-jaton'ny tranga. Raha miova ny fiovan'ny lahy sy vavy, dia matetika ny olona no manamarina ny fihetsika asehon'io lehilahy io. Ny fiarahan'olon-droa mitovy fananahana ihany koa dia mety hiteraka, araka ny naseho tao amin'ny:
Tranom-pitaovam-piarovana any Japana Ma
Fiovan'ny Finoana amin'ny Reingerenana: Silamo i Maung, fa Bodista kosa i Daw. Dr. Stevenson dia tsy nanoratra hoe inona no fivavahan'ny ray aman-drenin'ilay kambana, Tin sy Thaw, fa na i Maung na i Daw dia tonga nofo indray ao amin'ny fivavahana hafa. Raha hijery tranga hafa momba ny fanambadiana teraka indray ao amin'ny nofo misy silamo dia mankanesa any:
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Maung sy Daw dia nanjary niova ho ny ankizivavy mpiray tam-po amiko, Tin.
Ao amin'ny antontan-taratasin'i Dr. Stevenson momba ny raharaha mifandraika amin'ny Maung | Gyi sy Daw | Nge, nanondro andian-tantara birmaniana iray hafa izy izay nanambaran'ireo mpivady indray ny tovolahy roa lahy. Ity tranga ity dia navoakan'ny Fielding Hall tao amin'ny bokiny, Ny fanahin'ny olona, izay nivoaka tao amin'ny 1898. Hall dia nanamarika fa ny vatana amin'ireo tovolahy roa ireo koa dia nanenika ny fanorenany tamin'ny fiainany taloha ho vadin'ny mpivady.
Stevenson dia nanaiky ny kambana kambana 31 izay nahatsiaro ny fahatsiarovan-tenan'izy ireo tamin'ny fahazazany nandritra ny fahazazana izay nekena ho marim-pototra. Ao amin'ny 100 isan-jaton'ireo tranga ireo, ireo kambana ireo dia nanana fifandraisana naharitra teo amin'ny fiainana. Raha te hianatra bebe kokoa momba ireo olon-tiany izay navaozina ho zana-ketsa ianao dia alefaso any:
Ny Fanahy dia ny fandraisana anjara amin'ny trangan'aretina ao amin'ny vatana: Naharay fanambarana nofinofy avy amin'ny ray aman-dreniny Maung sy Daw i Tin, nanambara fa hatsangany ho zanany izy ireo, izay nitranga.